aad bar a tabaha yar in ay si fiican u qaadan bamka la taaban karo u soo dhaadhacay - Shiinaha Qingdao CO-NELE Group
aad bar a tabaha yar in ay si fiican u qaadan hoos bamka la taaban karo ee
Marka biibiile la hoos dhigay, markii rabitaan ee tuubooyin bamka la taaban karo waa ballaadhan yahay, la taaban karo hoos u soo carfaan, ay sabab u tahay culeyska u gaar ah in dhuumaha dhiiran tahay, taasoo keenta bannaan ee beebka gudbinayeen ama keenaya la taaban karo in ay la kala takoori sabab u tahay is-dal, oon ku keenaya biibiile gudbinayeen in la dhaafiyay. Si looga hor, tallaabooyinka soo socda ayaa la qaadi karaa:
1. Marka la liso hoos u taaban karo, is-socodka ah ee la taaban karo waxaa si dhow la xiriira in ay u dhacooda. Biyaha waa in la tuujiyay ka hor inta shubto la taaban karo, hubi meesha dharkiisa biibiile kasta si loo hubiyo in shaabaddii ma biyo kaydkii, ka dibna lisidda malaastiisa oo si saliidayn biibiilaha iyo waqti isku mid ah hawada ayaa laga saaro.
2. Marka rabitaan ee tuubooyin ka wada weyn yahay 4 ° -7 °, iyo biibiilaha ka siman u dhiganta dherer ah in ka badan 5 jeer dhibic toosan waa in la siiyaa dhamaadka hore ee beebka downwardly dhigin, oo iskaa ah qulquli ee la taaban karo ee laga hortagi karo kooxaha iska-caabbinta frictional.
Qingdao bamka la taaban karo qiimaha gaari xamuul ah (4)
3. Marka rabitaan biibiilaha ka wada weyn yahay 7 ° -12 °, marka lagu daro biibiile siman of 5 jeer dhererka set dhamaadka hore ee beebka dhiiran, waalka qaaca ah waa in la siiyaa dhamaadka sare ee biibiilaha hoos ku. Inta lagu guda jiro habka shubto ah, haddii ay jiraan waa dalool ah ee dhuumaha dhiiran, waalka qiiqa waa in marka hore la furay ilaa dhuumaha dhiiran waxaa ka buuxa la taaban karo, iyo marka waalka qaaca buuxdhaafaa malaastiisa oo, waalka dhammayn xiran yahay oo ku bam caadiga ah waxaa la sameeyaa .
4. biibiile The hoos u leh dhibic weyn lagu rakibi karo ee xarunta biibiilaha vertical hoos u si loo soo dajiyo iyo biibiilaha stop in u dhaqmo sida jejebiyey a a. Geli dhowr kubadaha geed isbonji adag ama nadiifinta meelaha gelanayo ka hor inta ku listo malaastiisa si looga fogaado khasaaraha ka mid ah madaafiic. Waxay qaban karto miisaanka malaastiisa.
5. Marka xaddidan by xaaladaha goobta, marka aanay jirin meel ku filan si ay u diyaarin biibiile siman dhamaadka hore biibiilaha, midhona kor dhigin, tuubadu, xusulka ama biibiile annular waa la isticmaali karaa halkii in la kordhiyo iska caabin ah frictional iyo in laga hortago la taaban karo ee ka dal, midhona kor qaybta biibiile.
Qingdao bamka la taaban karo qiimaha gaari (6)
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo aan loo eegin in bamka la taaban karo ee ku xiran yahay kor ama hoos, oo dhererkiisu wuxuu diinta ka siman ee qasabadaha kala duwan, in tuubooyin dhabta ah, ay sabab u tahay foomamka, tirada iyo muuqaalka guud ee dhulka ee qasabadaha kala duwan, masaafada u gudbinayeen dhabta ah iyo height sidoo kale way kala duwan yihiin, taas oo waa u sahlan tahay xisaabinta. Beddel ah toobinta tube, xusulka, tuubada, ilaa tube toosan, hoos tube toosan, iwm galay dhererka siman. Isla mar ahaantaana, qiimaha xisaabinta siman waxaa sidoo kale la xiriira sifooyinka la taaban karo, dhexroor iyo biibiilaha, iyo wixii la mid ah ee.
waqti Post: Nov-21-2019